Shiinaha Shaandhaynta nus-maaskaro FFP2, soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha CE2163 | Shanyou
2. Naqshad isku laaban oo saddex-geesood ah, sanka oo la hagaajin karo, iyo dheg dheg laastik ah oo tayo sare leh si loo ilaaliyo dhegahaaga. Hook ayaa la heli karaa si loo habeeyo wareegga dhegta.
3. Wax aan sun ahayn oo aan cuncun lahayn ；
4. Karti-sifeynta Qaybta (PFE): EN 149 ≥94% ；
5. Badeecadu waxay ka kooban tahay 4 ama 5 lakab difaac; waxay siisaa sheyga sare iyo bakteeriyada waxtarka sifeynta. efficiency
Waxqabadka Maskaxda Kala-sifeynta Walxaha: Heerka EN 149 + A1: 2009, wuxuu sharxayaa qeexitaanka alaabada iyo shuruudaha waxqabadka. Maaskarada waxaa la tijaabiyaa kadib qaboojinta sida ku cad baaritaannada lagu sharraxay heerkan iyo heerarka ilaalinta ee waji-xidhka ayaa la go'aamiyaa. Imtixaano muhiim ah iyo shuruudaha waxqabadka ee loo isticmaalay kala soocida waji-xidhka ayaa lagu muujiyey jadwalka.
Gelitaanka walxaha shaandhada (%) (Max La Ogol yahay)
Wadarta Baxsiga Gudaha (%) (Inta La Ogol Yahay)
Kaarboon dioxide ka kooban hawo neefsashada (%)
Xadka iska caabinta
Cadaadiska ugu badan ee la oggol yahay (mbar)
30 L / daqiiqo
95 L / daqiiqo
160 L / daqiiqo
Waxyaabaha wajiga laga daboolo ee FFP2:
Percentage Boqolkiiba sifeynta Aerosol: Wax aan ka yarayn 94%.
Rate Qulqulka qulqulka gudaha: ugu badnaan 8%.
Maaskarkani wuxuu bixiyaa difaac dhinacyo kala duwan ah sida warshadaha muraayadaha, macdanta, dhismaha, warshadaha dawooyinka iyo beeraha. Waxay si wax ku ool ah u joojisaa kiimikada budada ah. Maaskarkani wuxuu kaloo u adeegi karaa difaac kahortaga fayrasyada neef-mareenka sida hargabka avian ama cillad daran oo daran oo neefsashada la xiriirta coronavirus (SARS), iyo sidoo kale bakteeriyada cudurka sambabaha iyo qaaxada. Waxay la mid tahay maaskaro N95.
Maaskaro EN 149 FFP2 waxay leeyihiin shuruudo waxqabad oo la mid ah N95 waji ee Mareykanka iyo miirayaasha KN95 ee Shiinaha. Si kastaba ha noqotee shuruudaha imtixaanka EN 149 waxoogaa way ka duwan yihiin heerarka Mareykanka / Shiinaha / Jabbaan: EN 149 waxay u baahan tahay baaritaan dheeri ah oo saliid ah oo loo yaqaan 'paraffin-oil aerosol' waxayna ku tijaabisaa heerar kala duwan oo qulqulaya waxayna qeexaysaa dhowr heerar oo laxiriira oo la ogolaan karo
Faahfaahinta xirmada: 5pcs / Bag, 25pcs / box, 1000pcs / Carton;
Cabbir: 640 * 410 * 500mm;
Hore: Sifeynta nusa-badhka FFP3
Xiga: Sifeynta Qeybaha Maaskaro FFP2, CE0598
Sifeynta nusa-badhka Ffp2
Shaandhaynta nus-maaskaro Ffp3
Maaskaro badh Ffp2
Maskaxda Neefsashada Neefsashada